Abakhiqizi bamitha wamandla wegesi okhokhelwa ngaphambili - Abaphakeli base China abakhokhela imitha yamandla kagesi, Factory
I-3phase 4wire energy metres (eyihlane) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008 ne-GB / T17215.323-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
I-3phase 4wire prepaid energy imitha (ikhadi le-IC) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezinhlelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008 ne-GB / T17215.323-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Imitha yamandla okukhokhelwa kwesigaba esisodwa (ikhadi le-IC) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Imitha yamandla kagesi yesigaba esisodwa (kude) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla owenziwe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezinsizakalo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Imitha yamandla kagesi yesigaba esisodwa (eyi-+ + module) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Imitha yamandla kagesi yesigaba esisodwa (ikhadi le-IC) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla owenziwe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezinhlelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Imitha yamandla kagesi yesigaba esisodwa (i-IC khadi + module) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla owenziwe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Imitha yamandla we-3phase (i-IC khadi) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezinsizakalo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.301-2007, DL / T614-2007 ne-DL / T645-2007. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.